🥇 ▷ Shanta astaamood ee muhiimka ah ee Lenovo Yoga C940 ✅
Shanta astaamood ee muhiimka ah ee Lenovo Yoga C940
Lenovo Yoga C940 waa mid ka mid ah shirkadaha ugu beddelka badan ee hadda lagu beddelo shirkadda. Waxa intaa u dheer lahaanshaha naqshad u oggolaaneysa in loo isticmaalo kiniin ama laptop iyada oo loo eegayo baahiyahayaga, waxaa loo rari karaa si raaxo leh iyada oo ay ugu mahadsan tahay miisaska fudud ee aan ka badnayn 2 kiilo miisaanka. Yoga C940 wuxuu sidoo kale ku socdaa laba cabbir oo shaashad ah: 14 ama 15.6 inji, iyo sidoo kale leh processor illaa Intel Core i7 ee qarnigii tobnaad. Faa’iidooyinka kale ee weyn ayaa ah batterigiisa illaa 17.5 saacadood oo adeegsi ah, waqti noo oggolaaneysa inaan la tagno iyada oo aan dhibaato la kulmin safarro dhaadheer.
Isbadalkan cusub ayaa sidoo kale ku faanaya hab qabow oo caqli gal ah oo lagu xoojiyay AI, kaasoo xakameynaya guryaha kuleylka, sidaas darteedna kor u qaadaya xakamaynta taageereyaasha, iyo sidoo kale kaaliyaha isku dhafka ah ee Alexa. Lenovo Yoca C940 wuxuu ku sii socon doonaa iibka bisha November ee Spain qiimihiisu waa 1,700 euro. Aqri si aad u ogaato 5ta fure ee muhiimka ah.
Lenovo Yoga C940 – Xaashi farsamo
Nooca kooxda Beddeli karo
Shaashadda guud IPS 14 touch taabasho buuxda HD, Dolby Vision
IPS 15.6 ″ taabasho buuxda HD, Dolby Vision
IPS 15.6 ″ 4K / UHD taabashada, Dolby Vision, ilaa 500 nits.
Processor iyo RAM 14 ″: ilaa Intel Core i7 jiilka 10aad / 15.6 ″: Intel Core i7 jiilka 9aad, ilaa 16 GB DDR4
Kaydinta PCIe SSD ilaa 2TB
Bateriga Ilaa 17.5 saacadood oo ah ikhtiyaarka buuxa ee HD, 10.5 oo leh muuqaal UHD ah, si dhakhso ah u dallacsiin ah
Cod Dib-u-habeyn lagu sameeyay qaabeynta dhawaaqa leh ee wadahadalka Dolby Atmos
Naqshadeynta Aluminiumka dhalaalaya ee midabada macdan ama midabka mica
14 inji: 14.1 milimitir, 1.35 kilos
15.6 inji: 17.5 milimitir, 1.9 kiilo
Hawlaha La Soo Bandhigay Alexa, habka qaboojinta smart
Taariikhda lagu sii daynayo Nofeembar
Qiimo Laga bilaabo 1,700 euro
1. Naqshad qaab leh oo qalin leh
Lenovo Yoga C940 waxaa lagu dhisay aluminium leh jaakado aad u dhuuban oo naqshadeeya naqshadeeyahooda. Waxaan dhihi karnaa qaabkani wuxuu ka sii fogaanayaa laptopskii hore isaga oo wata naqshado adag, soo dhaweyn fikrad cusub oo fudud oo si habsami leh u fulinaysa dhinac ilaa dhinac. Tani waa shey sidoo kale lagu qiimeeyo culeyskiisa. Yoga C940 oo leh 14 inji oo culeyskiisu miisaankiisu yahay 1.35 kiilo. 15,6 inji 1.9 kiilo, oo aan xumeyn midna. Qalabkani wuxuu sidoo kale la imanayaa miis yar, kaas oo si toos ah loogu shubi karo isagoo gelinaya godkiisa. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan sawirro bilaash ah ama qorno emaylka oo aan qoraallo si dhakhso leh u qaadanno.
Markii aan helno, shirkaddu waxay noo oggolaan doontaa inaan ku qabsanno laba cabbir oo shaashad ah iyo qaraaro kala duwan. Waxaan dooran karnaa moodal leh 14-inji IPS taabasho taabasho ah iyo xalka HD buuxa iyo laba kale oo leh 15.6 inji dherer buuxa HD ama 4K ah (sidoo kale taaban). Mid kasta oo ka mid ah waxaa ka mid ah tikniyoolajiyadda Dolby Vision si loo wanaajiyo tayada aragtida markii la ciyaarayo waxyaabaha ku duuban warbaahinta.
2. processor-kii tobnaad
Lenovo la beddeli karo ayaa leh jiilka tobnaad ee Intel Core i7 processor gudaha, in kasta oo laga heli karo oo kaliya qaabka 14-inji ah. Kooxda leh 15,6 inji waxay leeyihiin Snapdragon ilaa Intel Core i7 ee jiilka sagaalaad. Labaduba waxaa weheliya RAM ilaa 16 GB DDR4 ah iyo kaydinta illaa 2 TB SSD. Mid ka mid ah sida ay u kaladuwan yihiin waa in ay leedahay qaab qaboojin oo caqli gal ah oo ay sii wanaajisay AI. Ujeeddada ayaa ah in la xakameeyo astaamaha kuleylka ee qalabka si loo hagaajiyo xakameynta fanaaniinta. Qaabkaan, qalabku wuxuu sifiican ugu shubayaa kuleylka marka saacado badan ay buux dhaafeen ilaa bilowgeeda ama maalmaha xagaaga.
3. Caawiyaha Alexa
Mid ka mid ah furayaasha ugu muhiimsan ee Lenovo Yoga C940 waa ku darista kaaliyaha Alexa. Tan macnaheedu waa inaan adeegsan karnaa hawshan markaan u baahanahay inaan ogaano nooc ka mid ah macluumaadka ama aan weydiisano inuu si dhaqso leh noogu qaado astaamaha qalabka. Tusaale ahaan, codkaaga ayaad ku dalban kartaa inaad raadsato makhaayadaha ku dhow gurigaaga kuwa u adeega Pizza ugu fiican. Haddii aad leedahay aalado caqli badan, waad ka xakameyn kartaa guriga adoo wata amarro qaarkood, sidoo kale waxaad ku ilaalin kartaa xirmadaada Amazon.
4. Batariga saacado dheer
Dhanka qaybta batteriga, Lenovo Yoga C940 waxay ku faantaa madax-bannaani wanaagsan, waa wax had iyo jeer ku habboon anshax markii ay tahay inaan safarno saacado badan. Iyada oo leh HD HD buuxa waxaa suurtagal ah in la haysto illaa 17.5 saacadood oo adeegsi ah. Go’aanka 4k ayaa jaraya waqtigan 10.5 saacadood. Si kasta ha noqotee, sidoo kale waa jaantus wanaagsan. Waxa habboon in la tixgeliyo, sida aan had iyo goor dhahno, ayaa ah in wax walba ay ku xirnaan doonaan dejinta qaabeynta. Iyo, tusaale ahaan, isku mid maaha in la haysto iftiinka ugu badan illaa kan ugu hooseeya. Waa in lagu daraa in moodellada oo dhan ay kujiraan xukun degdeg ah, taas macnaheedu waa waxaan ku dallaci karnaa in ka badan kala badh wax ka yar saacad.
5. Jiritaanka iyo qiimaha
Lenovo Yoga C940 ayaa la rajaynayaa inay ku soo degto dalkeena Noofembar soo socota qiimo dhan 1,700 euro. Waqtigan xaadirka ah, waxaa lagu suuqeyaa gudaha Mareykanka labo nooc, labadaba leh soosaarayaal ilaa Intel Core i7 ee jiilka tobnaad iyo 14-inji gudi. Waan la socon doonnaa imaatinkaaga Spain si aan kugu wargalinno dhaqso.
Warar kale oo ku saabsan… Lenovo Yoga, Windows 10